ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီများကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ပြည်သူ့သတင်းထောက် (ဟစ်တိုင် စစ်ဂျာနယ်)
မကြာမီတွင် ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံကာ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုမည့် ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီများ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဖမ်းဆီးရမိ။စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးမြို့၌ ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီ(၁၉) ဦးကို ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူများက ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့ (၂-၁၁-၂၀၁၂) ရက်နေ့ကတည်းက တာဝန်သိပြည်သူတစ်ဦးထံမှ သတင်းရရှိခဲ့ကြောင်း၊ သတင်းရသည်နဲ့ တပြိုင်နက် အမျိုးဘာသာ သာသနာ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေးအသင်းကြီးမှ တိကျခိုင်မာအောင် သေချာစွာစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ရကြောင်း၊ သေချာပြီဆိုသည်နှင့် ယနေ့ (၅-၁၁-၂၀၁၂) ရက်နေ့ မနက် ၄း၀၀ နာရီတွင် လူငယ် (၁၁) ယောက်ဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့် လူကြီးလူငယ် အယောက် (၃၀) ခန့်က ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပေးခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးမြို့၌ ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီ(၁၉) ဦးကို ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူများက ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့ (၂-၁၁-၂၀၁၂) ရက်နေ့ကတည်းက တာဝန်သိပြည်သူတစ်ဦးထံမှ သတင်းရရှိခဲ့ကြောင်း၊ သတင်းရသည်နဲ့ တပြိုင်နက် အမျိုးဘာသာ သာသနာ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေးအသင်းကြီးမှ တိကျခိုင်မာအောင် သေချာစွာစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ရကြောင်း၊ သေချာပြီဆိုသည်နှင့် ယနေ့ (၅-၁၁-၂၀၁၂) ရက်နေ့ မနက် ၄း၀၀ နာရီတွင် လူငယ် (၁၁) ယောက်ဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့် လူကြီးလူငယ် အယောက် (၃၀) ခန့်က ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပေးခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့ ဖမ်းဆီးရာတွင် မနက် ၉း၀၀ ခန့်တွင် ဘင်္ဂလီ (၁၂) ယောက်ကို ဖမ်းဆီးရမိပြီး၊ မနက် ၁၀း၀၀ နာရီတွင် နောက်ထပ် (၉) ယောက် အားလုံး (၁၉) ယောက်ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ တစ်ယောက်မှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်၊ ဖမ်းဆီး သူများထဲတွင် ပြည်သူ့ရဲနှင့် ပြည်သူ့စစ် မည်သည့်လုံခြုံရေး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းနှင့် အာဏာပိုင်များ တစ်ယောက်တလေမျှပင် မပါဝင်ကြောင်း၊ မင်္ဂလာဥယျာဉ် ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍဝံသ၊ နေသာပညာရေးကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော်ဦးဓမ္မိကနှင့် သံဃာတော် (၅) ပါး၊ ဝိသုဒ္ဓါရုံ ကျောင်းတိုက်မှ ဆရာ တော် ဦးနိသာကရာဘိဝံသ၊ အောင်ရတနာဆရာတော် ဦးသုဇာတ၊ မြို့ဦးဆရာတော်ဦးဓမ္မာနန္ဒတို့ပါဝင်ကြောင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ချင်းတိုင်းရင်းသားအချို့လည်း ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော ဘင်္ဂလီများသည် အသက် (၁၄) နှစ်နှင့် (၁၅)နှစ်အရွယ်မှ အသက် (၃၀) နှင့် (၄၀) နှစ်ထိ ပါဝင်ကြောင်း၊ အများစုမှာ အ သက် (၂၀)နှစ် ဝန်းကျင် အရွယ်များဖြစ်ကြောင်း၊ ပြန်လည်ခုခံခြင်းမရှိဘဲ အေးအေးဆေးဆေးအဖမ်းခံကြကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးမိရာအရပ်မှာ ကလေးမြို့အနောက်တည့်တည့် ကလေးတက္ကသိုလ်၏ အနောက်မြောက်ဘက် ပျားစွဲတောင်ခြေရှိ ကျူတောကြီး အတွင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကျူပင်များထူထပ်လွန်း၍ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသော ဘင်္ဂလီတစ်ယောက်ကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးဖို့ရာ ခက်ခဲခဲ့ ကြောင်း၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ နာယက ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍဝံသထံမှ သိရသည်။
ခိုးဝင် ဘင်္ဂလီ (၁၉) ယောက်တွင် မြန်မာစကားကို ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းစွာပြောတတ်သူ မောင်တောမြို့နယ်မှ ဘင်္ဂလီ (၄) ယောက် ပါဝင် သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ယနေ့ မနက် ၁၁း၀၀ နာရီးခန့်တွင် မင်္ဂလာ ဥယျာဉ်ကျောင်းတိုက်သို့ ကာယကံမေတ္တာ နာရေးကားဖြင့် ဘင်္ဂလီများကို ခေါ်ဆောင်လာပြီး ကျောင်းတိုက် ဓမ္မာရုံပေါ်တွင် တန်းစီမတ်တပ်ရပ်ခိုင်းထားပြီး ကလေးမြို့ ပြည်သူလူထုကိုပြကာ မိနစ် (၂၀) ခန့် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြ ကြောင်း၊ တက်ရောက်သူ ပရိသတ် (၁၅၀၀) ခန့်ရှိကြောင်း၊ လိုက်ထရပ်ကားသုံးစီးဖြင့်ခွဲတင်ကာ မြို့တွင်းသို့ နာရီဝက်ခန့် လှည့်လည် ပြသခဲ့ပြီး ကလေးမြို့နယ် ရဲစခန်း၊ စခန်းမှူးထံအပ်နှံခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ထိုသို့ အာဏာပိုင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ အကူအညီမယူဘဲ ပြည်သူ့အင်အားဖြင့်သာ ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးရခြင်း၏အကြောင်းကို မင်္ဂလာဥယျာဉ်မှ ဆရာတော်ဦးပဏ္ဍဝံသက ယခုလိုပြောပါသည်။
“ရဲတွေက အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဖမ်းဆီးဖို့ နေနေသာသာ ပြည်သူက ဝိုင်းကူဖမ်းပေးတာကိုတောင် အင်တင်တင်လုပ်နေတယ်။ သူတို့လက်ထဲရောက်သွားရင် ဓာတ်ပုံလည်း ရိုက်ခွင့်မပေးဘူး၊ ဓာတ်ပုံလည်းတောင်းလို့မရဘူး၊ မီဒီယာမှာပါသွားမှာကိုပဲ ကြောက်လန့်နေကြ လို့ ပြည်သူသိအောင်ပြသပြီးမှပဲ ပို့လိုက်တာပါ။”
ထို့နောက် ဆရာတော်ဦးပဏ္ဍဝံသကပင် “ရိုက်တာနှက်တာ နှိပ်စက်တာမျိုးမဖြစ်စေရဘူး။ စိတ်ချ လုံးဝအာမခံတယ်လို့ပြောပြီးမှ ဖမ်းပေး တာပါ။” ဟု ရဲဌာနကို သတင်းပို့ပြီးမှ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းကို ရည်ရွယ်မိန့်ကြားသွားခဲ့ပါသည်။
ဆရာတော်ဦးပဏ္ဍဝံသနှင့် နေသာဆရာတော်ဦးဓမ္မိကအပါအဝင် ကလေးမြို့မှ ဆရာတော် သံဃာတော်များသည် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တို ဘာလ (၁၅) ရက်မှာ အမျိုးဘာသာ သာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဆရာတော် သံဃာတော်များ၊ မြို့မိ မြို့ဖများ၊ လူငယ်လူရွယ်များ၊ ဘာသာ ပေါင်းစုံ၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်သော ပြည်သူများဖြင့် ဖွဲစည်းထားသည့် တက်ကြွလှုပ်ရှား သည့် အသင်းကြီးဖြစ်ကာ ယခုဆိုလျှင် ဘင်္ဂလီများကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်မှာ (၅) ကြိမ်ရှိပြီး ပထမအကြိမ် ဘင်္ဂလီ (၁၀) ယောက်၊ ဒုတိယ အကြေိမ် ဘင်္ဂလီ (၄)ယောက်၊ တတိယအကြိမ် ဘင်္ဂလီ (၁၆) ယောက်၊ စတုတ္ထအကြိမ် ဘင်္ဂလီ (၁)ယောက် (အမျိုးသမီး) ပဉ္စမအကြိမ် (၁၉)ယောက် (ယခု) စုစုပေါင်း အယောက် (၅၀) ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီများသည် မြန်မာစကားပြောတတ်ကြပြီး မတတ်ချင်ယောင်ဆောင်နေသည်ဟု ယူဆနေကြပြီး၊ ဘူးသီးတောင် ဘက်မှလာ ကြောင်း၊ ပြည်မထဲဝင်ပြီး မန္တလေးမှ ရန်ကုန်ထိသွားကာ မလေးရှားဘက်သို့ ဆက်ကူးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့တိုင်း မြို့တိုင်းမှာ အထောက် တပ်ဖွဲ့များရှိကြောင်း ပြောသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီမရှိဟု ကမ္ဘာကြီးကို ငြင်းဆန်လိမ်ညာထားသော်လည်း ကလေးမြို့မှ တာဝန်သိ ရဟန်းရှင်လူပြည် သူများကတော့ ဦးခင်ရီ၏ မုသားထုပ်ကို ဆက်လက်ဖြည်ပြနေမှာဖြစ်ကြောင်းနှင့် နောင်အခါတွင် ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံကာ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးကို အတင်း အဓမ္မတောင်းဆိုတော့မည့်၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ရခိုင်အပါအဝင် အများပြည်သူတို့ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ကာ မြန်မာ့မြေကို လုယူသိမ်းပိုက်တော့မည့် နာမည်သူခိုး ဖိုးတွမ်တီး ကုလားဆိုးတို့၏ သမိုင်းလိမ်ကို ကမ္ဘာကြီးသိအောင် သက် သေပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။
(နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအရ ယနေ့ ညနေ ၄း၀၀ နာရီတွင် နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဖမ်းဆီးမိကြောင်း ထိုဘင်္ဂလီမှာ မနက်က လွတ် မြောက်သွားသူဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ )
စုံစမ်းရန်- ၀၉-၄၀၀၅၀၃၃၅၅ ၀၉- ၄၀၀၄၇၆၇၅၁
6 Responses to ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီများကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
ကြေးတောသား on November 9, 2012 at 8:42 am
AungNaing on November 9, 2012 at 9:56 am
Many Bangali(so-called Rohingya) Muslims are killing many Buddhists in Myanmar now. Bangali(so-called Rohingya) Mulims burn Buddhist Pagodaes and Monasteries. Besides that please save the Arakanese(Rakhinese). Please save the Arakanese(Rakhinese). Do you know Arakanese(Rakhinese)? I can give answer, Arakanese(Rakhinese) is real ethnic in Arakan(Rakhine) state in Myanmar. But Bangali(so-called rohingya) Muslims are not ethnic in Arakan(Rakhine) state in Myanmar. Bangali(so-called rohingya) Muslims are not minority community in Myanmar. Bangali(so-called rohingya) Muslims are real Bangali(Bangladesh). Because they are illegal people in Myanmar. Bangali(so-called rohingya) Muslims come from Bangladesh to Myanmar every years but they do not have passports and they illegally come from Bangladesh to Myanmar every years. But they do not come back to Bangladesh. Because Bangali(so-called rohingya) Muslims want to confiscate our land(Myanmar). So they often kill many ethnics in our land(Myanmar) every years.Bangali(so-called rohingya) Muslims destroy many Buddhist Temples and Pagodas. Bangali(so-called rohingya) Muslims are joining Tarliban, Al-Quator and some Muslims insurgent organization of all over the world. Bangali(so-called rohingya) Muslims often kill some Arakanese(Rakhine) in Myanmar every year. So They are real terrorists and murders.
phother on November 9, 2012 at 10:29 am
NINE NINE on November 9, 2012 at 11:57 am
Bangladesh is guarding their borderline seriously to push back the running away Bangalis into their territory from Rakhine crisis……………..but they can’t control their own nationals still flooding into Burmese land……………Why? There must be something wrong with it. If Bangladesh can control the inward, why can’t they do the same for the outward? Bangladesh haveaspecial plan to pour down their uncontrollable population over Burma this cheating way? If so, the Bangladesh gov is dishonest and we have to check back our relationship……………the most important thing is we must put enough guards along our borderline………….This ain’tajoke.
mgoogyaw on November 10, 2012 at 12:20 am
Okay,let us declare War with Bangladesh.
Myo Chit Maung on November 10, 2012 at 2:28 am
Need to make proper border guard between Bangladesh and Myanmar .
This is serious . Be alert.